basy – Page 3 – Midi Madagasikara
Ambatomaro : Mpivarotra iray notafihana jiolahy nirongo basy
Redaction Midi Madagasikara 23 janvier 2014 Ambatomaro, basy, Jiolahy, Mpivarotra, notafihana
Ny alin’ny talata tamin’ny 9 ora, mpivarotra iray eny amin’ny faritra Ambatomaro no notafihana jiolahy miisa dimy nirongo basy. Ny loharanom-baovao no nahalalana fa vao avy nanidy tsena tsy ela ny tompony. Avy hatrany dia nopitsohan’ireo mpangalatra ny varavarana ary teo izy ireo no niditra. Rehefa tao an-trano ry zalahy dia voaambana basy ny rehetra…
Pôlisy : Basy 197 sarona tamin’ny 2013
Redaction Midi Madagasikara 4 janvier 2014 197 sarona, basy
Voamarina tanteraka ny fiparitahan’ny basy teto amin’ny Nosy. Izany dia manazava ihany koa ny fisesin’ny asan-jiolahy mitam-basy nandritra iny taona 2013 iny, indrindra fa teto an-drenivohitra. Raha ny tarehimarika navoakan’ny pôlisy dia nahatratra 197 ny basy saron’izy ireo tamin’ny taon-dasa. Izany dia niaraka tamin’ny bala 94.568 , raha araka ny fanamarihana hatrany. Basim-borona no tena…